Ndevapi Vakubvumidwza Kufamba ne Kushanda PaLockdown (Essential Services)? - HealthTimes
January 4, 2021 January 4, 2021 Michael Gwarisa
ZVICHITEVERA kutemwa kwakaita matanho matsva e Lockdown kuitira kudzivirira kupararira kwe denda re COVID-19, ve Zimbabwe Republic Police (ZRP) ne hurumende ye Zimbabwe vaburitsa ivo mhando yevanhu ichange ichibvimidzwa kudarika pama road block emapurisa zvisina dambudziko mumazuva makumi matatu arikutevera.
Izvi zvinotevera kushambadzwa kwe Statutory Instrument kana kuti Si 10.21 inoburitsa pachena kuti munhu anonzi essential service ndeupi uye anobvumidzwa kuenda kubasa kana kushanda ndiyani. Mutauriri we mapurisa va Assistant Commissioner Paul Nyathi vati ivo ruzhinji rweZimbabwe rwunofanira kugara kudzimba rwuchitevedzera danho relockdown level 4.
Va Nyathi vazivisa zvekare kuti kune avo vanenge vachida kunotenga chikafu kana mishonga kunzvimbo dziri padhuze (5km radias) kubva kwavanogara hapadiwe tsamba dzekufambisa.
Unobvumidzwa kufamba kana zvaita sei?
Vanobvumidzwa kufamba ndevaye vanenge vachienda kunotenga chikafu nemishonga. Mapurisa achasunga munhu wese achawanikwa achimbeye munzvimbo dzinoungana verizhinji dzakafanana nema Supermarkets, mabangi ne pamabhazi vasina kupgfeka mamask zvakanaka huye vakaungana.”
Chii chinonzi Essential Services mu Zimbabwe?
“Ve Zimbabwe Republic Police (ZRP) vanotsinhidzira kuti vashandi vakakosha ve mubazi rehutano nemuzvipatara, nevanogadzira chikafu, ve ma banga, vanoshanda mumighodi, vashandi vanoona nezvekufambiswa kwemazwi, dzitsamba nedzinhare (Communication and Telecommunication) ne varimi ndivo chete vachabvumidzwa kudarika pama checkpoints ne ma road blocks.”
Tsamba Dzinodiwa Pakufamba mu Lokckdown Ndedzipi?
Vashandi vemubazi reHutano Nezvipatara: “Vashandi vemubazi rehutano vanofanira kupfeka maUniform ehukoti kana anoratidza basa ravanoshanda. Avo vanenge vasina Uniform vanopfeka hembe dzavo vanofanira kunge vaine tsamba kubva kumukuru we chipatara chavanoshandira ichitsanangura nguva, zuva raanofanira kunge aching ari pabasa.”
Vemakambani nemamwe masangano: “Vashandi vemakambani vanofanira kunge vane tsamba kubva kumukuru we kambani (Chief Executive Officer) kana kuti General Manager ichitaura nguva, nzvimbo nemazuva aunenge uchifanira kunge uri pabasa.
“Tsamba idzi dzinofanira kunge dzine nhamba dzechitupa chemunhu anyora tsamba pamwe chete ne number dzake dzekufonera. Usati wafamba nayo tsamba iyi unofanira kuenda nayo kuna Officer In charge we Kamba iri pedyo newe kuti ionekwe kuti hachisi chidhuura here.”
Vashandi Vehurumende ne ma pazi ehurumende (Parastatals): “Vashandi vehurumende vanofanira kunge vane tsamba (Exemption letter) kubva kuna Director kana kuti headmaster ichitaura zvakare nzvimbo, basa rinoitwa ne nguva dzebasa.
“Kana kuri ku provincial level, mushandi anofanira kunge ane tsamba (exemption letter) zvakare ichibva kuvakuru ve province.”
Varimi Ma A2 Farmers ne am A1 Farmers: “Murimi anofanira kufamba ne offer letter, lease agreement ne tsamba kubva kuna Officer In Charge.”
Varimi Vekumaruzevha: “Varimi vanofanira kunge vane tsamba inobva kwaSabhuku kana kuti sadunhu ichitaura kuti uri kufambirei huye nguva, nzvimbo nekuri kuendwa. Zvakare unofanira kunge une tsamba kubva kuna Officer in Charge.”
Vanotengesa Chikafu: “Unofanira Kunge Une Photocopy ye rezinisi re chitoro chako (Shop License ne tsamba kubva kuna officer in charge.”
Vanamuzvina zvitoro: “ Vanofanira kunge vane shop licence ne tsamba kubva kuna Officer in Charge.”
MaSecurity Gurd: “ Anofanira kunge ane Uniform yekukambani kwaanoshanda, chitupa chekubasa, tsamba kubva kuvakuru vekambani ichitaura nguva, kukushandirwa nenguva dzebasa.”
VaripaMishonga ne vanoda kubatsirwa kuzvipatra: “Macard anoratidza urwere hwavo, tsamba yachiremba inoratidza kuti pakufanira kutengwa mishonga.”
Varikuenda Kurufu: “Tsamba kubva kuna Officer in Charge ku District, tsamba kubva kuna Officer in Charge Province ichitaura kuti munhu akufambira rufu nekuri kunovigwa mufi huye vanochema havafanire kudarika makumi matatu (30).”
#COVID19, Health News, HealthTimes Vernacular
BREAKING: Zimbabwe Records 34 Deaths and Over 1000 Cases In 24 Hours